बाइबलका कथाहरू: येशू इनारमा आइमाईसित कुरा गर्नुहुन्छ - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
सामरिया पस्नुभएपछि येशू इनारनेर थकाइ मार्न बसिरहनुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँका चेलाहरू चाहिं सहरमा खानेकुरा किन्न गएका थिए। येशू थकाइ मारिरहनुभएको बेला एउटी आइमाई इनारमा पानी लिन आउँछे। उहाँले त्यो आइमाईलाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘मलाई अलिकता पानी पिउन देऊ।’
यो सुनेर आइमाई छक्क पर्छे। किन, तिमीलाई थाह छ? किनभने येशू यहूदी जातिको हुनुहुन्थ्यो र त्यो आइमाईचाहिं सामरी थिई। त्यतिखेर धेरैजसो यहूदीहरूले सामरीहरूलाई मन पराउँदैनथे। यहूदीहरू सामरीहरूसित कुरासमेत गर्दैनथे! तर येशू सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। यसकारण उहाँ यसो भन्नुहुन्छ: ‘तिमीलाई पानी कसले मागिरहेछ, चिनेकी भए तिमीले बरु उसैसँग पानी माग्ने थियौ र उसले तिमीलाई जीवनको पानी दिने थियो।’
येशूको कुरा सुनेपछि सामरी आइमाई यसो भन्छे: ‘हजुर, इनार गहिरो छ र तपाईंसित पानी उघाउने भाँडो पनि छैन। तब कहाँबाट तपाईंसित त्यो जीवनको पानी आउँछ?’
येशूले यसरी जवाफ दिनुहुन्छ: ‘यो इनारको पानी पिउने मान्छे फेरि तिर्खाउनेछ। तर मैले दिने पानी जसले पिउला त्यो कहिल्यै तिर्खाउनेछैन।’
सामरी आइमाई भन्छे: ‘हजुर, मलाई त्यही पानी दिनुहोस् र म तिर्खाउनेछैन। यहाँ पानी भर्न पनि आउनुपर्नेछैन।’
सामरी आइमाई येशूले साँच्चैको पानीबारे कुरा गर्नु हुँदैछ भन्ठान्छे। तर येशूले परमेश्वर र उहाँको राज्यबारे सत्य कुरा गर्नु हुँदैथ्यो। यो सत्य, जीवन दिने पानीजस्तै छ। किनभने त्यसले अनन्त जीवन दिन सक्छ।
येशूले अब त्यो आइमाईलाई यसो भन्नुहुन्छ: ‘जाऊ, तिम्रो लोग्नेलाई बोलाएर ल्याऊ।’
‘मेरो लोग्ने छैन’ भनेर उसले जवाफ दिन्छे।
अनि येशूले यसो भन्नुहुन्छ: ‘मेरो लोग्ने छैन भनी तिमीले ठीकै भन्यौ। किनभने तिम्रा पाँच वटा लोग्ने भइसकेका छन् र जो अहिले तिमीसित छ, त्यो तिम्रो लोग्ने होइन।’
येशूको कुरा सुनेर सामरी आइमाई छक्क पर्छे। किनभने उहाँले भन्नुभएको सबै कुरा साँचो थियो। येशूलाई यी सबै कुरा कसरी थाह भयो? येशू, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै यी सबै कुरा बताउनुभएको हो। ठीक त्यति नै बेला येशूका चेलाहरू फर्केर आउँछन् र उहाँलाई सामरी आइमाईसित कुरा गरिरहनुभएको देखेर उनीहरू छक्क पर्छन्।
हामी यो घटनाबाट के सिक्न सक्छौं? येशू सबै जातका मान्छेहरूलाई दयालु व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ। अरूको जात फरक भयो भन्दैमा हामीले उनीहरूलाई खराब ठान्नु हुँदैन। येशू सबैले अनन्त जीवन दिने सत्य सिकून् भनी चाहनुहुन्छ। हामी पनि अरूलाई त्यस्तो सत्य सिकाउन इच्छुक हुनुपर्छ।
यूहन्ना ४:५-४३; १७:३.
येशू किन सामरियाको इनारनेर रोकिनुहुन्छ र त्यहाँ एउटी आइमाईलाई उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ?
त्यो आइमाई किन छक्क पर्छे? येशूले उसलाई के भन्नुहुन्छ र किन?
त्यो आइमाईलाई येशूले कस्तो पानीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा येशू के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो?
त्यो आइमाई येशूलाई उसको विषयमा के थाह भएको देखेर छक्क पर्छे? येशूले यस्तो जानकारी कहाँबाट पाउनुभयो?
इनारमा भेटिएकी आइमाईको कथाबाट हामी के सिक्न सक्छौं?
यूहन्ना ४:५-४३ पढ्नुहोस्।
येशूको अनुकरण गर्दै हामीले भिन्नै जात अथवा सामाजिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूसित कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ? (यूह. ४:९; १ कोरि. ९:२२; १ तिमो. २:३, ४; ती. २:११)
येशूको चेला हुनेहरूले पाउने आध्यात्मिक फाइदाहरू के-के हुन्? (यूह. ४:१४; यशै. ५८:११; २ कोरि. ४:१६)
आफूले सिकेको कुरा अरूलाई बताउन आतुर सामरी आइमाईले जस्तै हामीले पनि कसरी आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्न सक्छौं? (यूह. ४:७, २८; मत्ती ६:३३; लूका १०:४०-४२)